Onjam-peo maromaro no naato tato ho ato noho izy ireo tsy manara-dalàna. Tsy namoaka fahazoan-dàlana akory ny minisitera mpiahy ny serasera dia avy hatrany dia nandefa ny fandaharany ireo radio ireo.
Fika tsotra ihany ny nampiasain’ireo dia ny resaka « extension » izany na koa ny fanitàrana ny onjam-peo any amin’ny faritra hafa. Mazava anefa fa efa nisy naoty nampiato ny fanitàrana rehetra nanomboka tamin’ny martsa teo.
Nanao ny fivoriambeny ny mpikamban’ny biraon’ny holafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara omaly. Ny tena votoatin’izany dia ny fomba fametrahana ny vaomiera manome ny karatra maha-matihanina ny mpanao gazety. Isan’ny tanjon’izy ireo ny mba tsy hidiran’ny minisiteran’ny serasera intsony ao anatin’ny lalana rehetra izay hahazoana ny karatra mpanao gazety. Efa nofoanana ny karatra navoakan’i Rolly Mercia fony izy minisitra raha hiverenana kely.
FIARA NISY NANAFIKA TENYANDOHARANOFOTSY
Nisy nanafika amin’ny andro atoandro ny fiara mpitatitra entana tetsy Andoharanofotsy ny alatsinainy teo. Lasa ny vola izay mitentina 80 tapitrisa ariary tao anatiny. Jiolahy mitam-basy maromaro no nanao ny fanafihana ary toa efa fantatr’izy ireo ny fisian’ny vola izay tao anatin’ilay fiara lehibe. Mafy ny angom-baovao ataon’ny jiolahy ary mihoatra lavitra noho ny an’ny mpitandro ny filaminana aza izany matoa isaky ny mandeha dia hitan’izy ireo hatrany ny misy ny vola sy ny fanatontosana ny fanafihana.
Mamon-drongony dia namaky trano. Izany no nataon’ny lehilahy iray teny Itaosy. Soa fa maro olona tao amin’ilay tokantrano ary raikitra ny tanamaro tamin’ny fisamborana azy. Tsy afa-nanoatra intsony satria sendra ny be noho ny vitsy. Nantsoina ny polisy naka azy tao ary nosokafana avy hatrany ny fanadihadiana ilay olona. Mbola nahitàna fonoson-drongony maromaro teny aminy nandritry ny fisavàna azy.
FAMPIHAVANANA TANY MIANDRIVAZO
Vitan’ny nofon-kena mitam-pihavanana ny famahana ny olana izay nitranga tany Miandrivazo. Izany dia mahakasika ny fahafatesan’ny olona fito izay vokatry ny disadisa teo amin’ny fianakaviana roa izay nifamono ny niafarany ary nifandoro trano. Voatery niditra an-tsehatra hatramin’ny OMC mba handaminana ny raharaha izay nivaha ihany. Nampatahotra ny olona sao ho lasa ady an-trano ity nitranga ity kanjo mba voavaha ihany.
JIOLAHY ANY TOAMASINA
Mitety trano ary mijerijery izay horobaina ireo jiolahy ny atoandro. Ny alina izy ireo dia manatontosa amin’izay ny fanafihana. Izany no nitranga ao Toamasina. Ny alahady teo no nanafika ireo jiolahy teny Ambolomadinika. Soa fa nahazo vaovao momba ireto jiolahy ny polisy ary nanao ny fisavàna ny tranon’ireo. Karazan’entana maro no hita tao toa ny fahitalavitra, ny famakiana kapila mangirana sy ny kojakojan-tokantrano maro. Olona efatra no voasambotra.